Sida loo Delete "Kale" on iPhone
Part1: Waa maxay "Kale" on iPhone
Sida aad arki doonto, waxaa jira waxyaabo badan oo ah alaabtii in dhamaado ilaa "Kale" in aad iPhone. Oo haddii aad waxyaalahaas marnaba nadiifinta, waxa uu u ururay oo ugu dhaqsaha badan aad dareemi doonto kala bar in meesha waxa kor loogu qaaday "Kale" in qalab aad. Sidaas, waxaad u baahan tahay si aad wax lagu nadiifiyo.
Qeybta 2: Sida loo Gacanta Delete "Kale" on i P thinking
Talaabada 1: Tag Settings Open markaas Guud iyo ugu dambeyntii Isticmaalka
Talaabada 2: Riix wax app waaweyn
Talaabada 3: Documents & Data soo bandhigay tirada guud ee xogta la kaydiyaa by in app gaar ah.
Waxaad arki doonaa in app this laftiisa waa dhab ahaantii aad u yar. In image soo socda, waxaad arki doontaa in app waa 30.8 MB halka xogta ku kaydsan yahay 135 MB. Tani 135 MB waa wixii dhab ahaan u galaa aad xogta "Kale". Xogtan kooban tahay taariikhda browser, abuse, cookies, maylka adag ee sawiro iyo videos, app lagu kaydiyaa database files.
Waxyaabaha sida dhici oo kaliya aad u baahan doontaa in aad iska eegto hab loogu talagalay si ammaan ah nadiifinta xogta si ay jiraan meel ku filan oo ku saabsan iPhone.
- Qaado gurmad ah xogta aad via iCloud oo dhan (halkii via Lugood) laakiin haddii aad ku qanacsan tahay iCloud, waxaad had iyo jeer soo dhaweeyay in gurmad on iCloud.
- dheeraad ah, hubi in - laba jeer ama saddex jeer hubi aad wax aad xoojiyaa oo dhan helay.
- Dib u celi iPhone: marka hore u tagtaa Settings markaas General markaas celi dibna masixi All Content iyo Settings
Talaabada 4: Ku xiridda iPhone in ay Lugood iyo Soo celinta kaga imaanayo.
Waxay ka soo Daahiriyo kasta oo ku meel gaar ah files, cookies, khasnado iyo waxyaabo la mid tahay album in xado yar qaniinyada waqti iyo xaddi badan oo meel bilaash ah. Tani Daahiriyo wax badan, laakiin aan wax badan oo dhan tegi, weli waxaa sii jiri doonaa qaar ka mid ah macluumaadka "Kale".
Waxaad si fiican u sameyn doonaa wax dhif ah in ay si cad uga soo Chine oo kaydka xogta weyn. Qaar badan oo ka mid ah barnaamijyadooda ku leeyihiin bar in ay tirtirto xogta laftiisa. Halkee suurtagal maaha, oo aad u socoto si u leeyihiin in ay maciinsadeen in ay tirtiro xogta.
Oo sidaas daraaddeed ku saabsan yahay sidii ay uga takhalusi xogta "Kale" ka iPhone oo frustratingly aad reebay Walxaha aad iPhone.
Qeybta 3: Guji Si Bilaash ilaa Space More for Your iPhone
SafeEraser Wondershare waxaa loo isticmaalaa in si joogto ah masixi wax walba si ammaan ah iyo sidoo kale ammaan ku iPhone, iPad ama iPod ah. Waxay ka hortagtaa Xatooyo Aqoonsiga marka iibinta qalab jir ah ula 1 Click "Nadiifi Suuliyada" dhawritaanka xuquuqda gaarka ah. Waxa aad ku hayaa macluumaad shakhsiyeed oo ammaan ah oo si joogto ah u masaxdo la SafeEraser aad Mrka qalab hore ka hor.
Features ee Wondershare SafeEraser
Si joogto ah tirtiro Device - Marka aad dib, ganacsi ama iibinta aad iPhone, masixi phone doorasho 1-Click ka ciyaari kara trick aad iyo aad tirtirto wax walba si joogto ah ka hor marayay qalabka.
Safaysaa Data Private & Free Up Space - SafeEraser hubiyo in xogta la kaydiyaa telefoonka halka daalacanaya internetka, adiga oo isticmaalaya barnaamijyadooda, fariimaha diraya, iwm ahaato qarsoodi. Waxaa xogta gaarka ah ku hayn doonaa si ammaan ah, la xorayn, meesha bannaan ee.
Nadiifi qashin File - 1-Guji nadiifinta samayn doonaa oo dhan xawaare fiicnayn qaadidda dhammaan faylasha junk iyo macluumaad kale oo aan loo baahnayn.
Sidee loo isticmaalo si lacag la'aan ah ilaa meel dheeraad ah oo aad iPhone in tallaabooyinka la Screenshot:
Talaabada 1: Download app oo ku xidh.
Ka dib markii la rakibey, ordo SafeEraser on your computer. Connect aad iPhone via cable USB si aad u computer. Ka dib markii qalab la aqoonsan yahay, waxaad arki doontaa ilaa pop uu furmo suuqa ugu weyn.
Daaqadda pop up ka, waxaad arki doontaa macluumaad intii qalab aad la socoto 5 kale muuqaalada on xaq.
Talaabada 2: 1-Guji Nadiifinta
Feature koowaad waa Nadiifinta 1-Click. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in guji ku yaal iyo iskaanka waxay billaaban doontaa qalab aad si toos ah.
Ka dib markii raajo la soo gabagabeeyo, waxaad arki doontaa tirada guud ee files junk soo bandhigay. Hadda waxaad u baahan tahay inaad guji "nadiifinta" xorayn boos qalab aad.
Xaqiiji inaad haysato qalab aad ku xiran halka habka iskaanka u dhameystiray, si aad u hubiyo in files junk waxaa lagu nadiifiyo gebi ahaanba.
Marka aad la samayn doonaa nadiifinta, waxaad arki doontaa in uu suuqa ka soo muuqan doonaa sida soo socota, soo bandhigeen warbixin meel ka mid ah qalab aad ka.
Taas ka dib, waxaad sidoo kale ku noqon karaan Home page adigoo gujinaya "Home" ama guji "Rescan" mar kale in iskaan qalab aad.
5 Tallaabooyinka lagu masixi Cache, Cookies, iyo Taariikhda on Android Phone
Sida loo Delete Recent on iPhone
Siyaabaha la isu tirto faylasha labalaabka on Windows iyo Mac
Sidee loo nadiifiyaa Registry kombiyuutarka
> Resource > masixi > Sida loo Delete "Kale" on iPhone